အန်ကောဝပ် - မှတ်စုစာအုပ်
အန်ကောဝပ်ကျောင်းတော် ဟာ ကမ္ဘောဒီးယား နိူင်ငံ အန်ကော မြို.ဟောင်းမှာ တည်ရှိပြီးတော. ၁၂ ရာစု အစောပိုင်းက
Suryavarman II ဆိုတဲ. ဘုရင်ကြီးက ဆောက်လုပ်ခဲ.တယ်လို.ဆိုပါတယ်။
အန်ကောဝပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့ အမြင့်မှာ မြေပြင်မှ ၆၅မီတာ မြင့်မားလှသည်။ ပုဂံမှ အမြင့်ဆုံး သဗ္ဗညု ( ၆၁မီတာ ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ်မြင့်မားလှပေသည်။ အန်ကောမြို့ဟောင်း၏ ဘုရားတိုင်းတွင် ကျုံးရှိသည်။ အန်ကောဝပ်၏ ကျုံးကား ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသည်။
အန်ကောဝပ်ဘုရားကျောင်းသည် မြင့်မိုရ်တောင်ကို အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပြီး တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြင့်မိုရ်တောင်ကို ဖော်ကျူးထားသော လက်ရာများအနက် အန်ကောဝပ်သည် အကောင်းဆုံး လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင့်မိုရ်တောင်ကို ၀ိုင်းရံထားသော ပင်လယ်ခုနစ်စင်းနှင့် သမုဒ္ဒရာခုနစ်ခုကို အန်ကောဝပ်၏ ဗိသုကာလက်ရာထဲတွင် အကောင်းဆုံးဖော်ကျူးနိုင်ခဲ့သည်။
အန်ကော မြို့ဟောင်းကြီး၏ အခြားထင်ရှားသောနေရာမှာ Bayon ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားကျောင်း၏ ထူးခြားချက်မှာ များပြားလှသော မျက်နှာများဖြစ်သည်။ အရင်တုန်းက ဗုဒ္ဓ၏ မျက်နှာများဟု နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး တစ်ချို့က ခမာဘုရင်တို့၏ မျက်နှာများဟု ယူဆကြသည်။
နောက်ထပ်နာမည်ကြီးသော နေရာမှာ Ta Prohm ဆိုသောနေရာပင်ဖြစ်မည်။ Tomb Rider ကိုကြည့်ဖူးသူတိုင်းအတွက် ထိုနေရာနှင့်စိမ်းမည် မဟုတ်ပါ။ အန်ကောမြို့ဟောင်းသည် တစ်ချိန်က တောအုပ်ကြီးထဲတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ လူတို့၏ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးက ပြန်လည်တူးဖော်ပြီးသောအခါ အန်ကောမြို့ဟောင်း၏ အလှသည် ပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာသည်။ ထိုဘုရားကျောင်း၏ ထူးခြားချက်မှာ သမိုင်းပညာရှင်တို့၏ မတူးဖော်ခင်အတိုင်း အရှိကိုအရှိအတိုင်း ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Silk Tree ၏ ကြီးမားလှသော အမြစ်များကြားထဲတွင် ဘုရားကျောင်းသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့် မတ်တပ်ရပ်စဲရှိသည်။ ပန်းရောင်းဖျော့ဖျော့ အမြစ်ကြီးများသည် မြွေလိမ်မြွေကောက်ပမာ ဘုရားကျောင်းကို ရစ်ပတ်ထားပြီး အစိမ်းရောင်ရေညှိပင်များက လွှမ်းခြုံထားသည်။ မြေ၏သဘာဝနှင့် လူသားတို့ဖန်တီးမှု နှစ်ခုသည် လှပစွာပေါင်းစည်းနေသော နေရာလေးဖြစ်သည်။
အန်ကောမြို့ဟောင်းကြီးသည် ပုဂံလိုဘုရားကျောင်းများစွာ တည်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ ထူထပ်အုပ်ဆိုင်းနေသော သစ်ပင်ကြီးများကြောင့် ဘုရားကျောင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မမြင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုက နီးနီးလေးပါ။ အန်ကောမြို့ဟောင်းသည် ဘုရားကျောင်းများနှင့် လှပနေရုံမျှမက မြို့လေးကလည်း နွေးထွေးပျူငှာသော Cambodian လူမျိုးများကြောင့် လှပသောမြို့ကလေး ဖြစ်သည်။
စားစရိတ်နှင့် ဟိုတယ်စရိတ်မှာလည်း သိပ်ပြီးဈေးမကြီးလှ။ Old Market မှာပိုးပုဝါနှင့် ငွေထည်များဈေးသက်သာစွာ ၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ပိုးပုဝါတစ်ထည်ကို US$2သို့မဟုတ်3လောက်သာ ပေးရသည်။ ငွေထည်ကတော့ ဈေးသက်သာပေမယ့် အရည်အသွေး သိပ်မကောင်းပေ။
ကမ္ဘောဒီးယားအစားအစာမှာ ဗီရက်နမ် အစားအစာနှင့်လည်း အနည်းငယ်ဆင်တူသည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဟင်းခွက်တိုင်းတွင် ပူဆီနံအရွက်နှင့် စပါးလင်ကိုအများဆုံးသုံးသည်။ စပါးလင်နံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ တော်တော်စားလို့ကောင်းသည်။